हिन्दु धर्मशास्त्र र बैज्ञानिक रुपमा पिपलको अतुलनिय महत्व : पढेर शेयर गरौँ सबैको भलो होस् ! - Man Xune Kura
हिन्दु धर्मशास्त्र र बैज्ञानिक रुपमा पिपलको अतुलनिय महत्व : पढेर शेयर गरौँ सबैको भलो होस् !
धर्मशास्त्रमा यी तीन बोटलाई त्रिदेवको नामले चिनिन्छ । जस्तै बरलाई बट शावित्री (शिव) पनि भनिन्छ, पिपललाई विष्णु र स्वामीलाई ब्रह्मा भनेर धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । गाउँले भाषामा हामीले भन्नुपर्दा बर भनेको लक्ष्मी, पिपल भनेको विष्णु र स्वामी भनेको लोकन्ती भनेर चिन्न सक्छौं । जसले जे जस्तो तरिकाले व्याख्या गरेपनि रोप्दा बर पिपल र स्वामीसंगै रोप्ने परम्परा छ किनकि यी तीनै बृक्षलाई त्रिदेवको नामले चिनिन्छ ।
वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट पनि पिपललाई पूजनिय मानिन्छ। किनकि यो यस्तो वृक्ष हो जसले गर्मीमा शितलता प्रदान गर्दछ र जाडोमा तातो हावा निकाल्दछ। पिपलबाट सधैं अक्सीजनको संचार हुन्छ। आयुर्वेदमा भनिएको छ कि पिपलको हरेक भाग जस्तै पात, फल सबै औषधीको रुपमा प्रयोगमा आउछ। यसबाट कयौं गम्भीर रोगहरुको पनि उपचार सम्भव हुन्छ।भनिन्छ कि चाणक्यको समयमा सर्पको विषको खतराबाट बच्नको लागि ठाउँ ठाउँमा पिपलको पात राखिन्थ्यो। पानी शुद्ध गर्नको लागी पनि जलपात्रमा ताजा पिपलको पात राख्ने प्रथा प्राचीनकाल देखि नै चलि आएको छ।
The post हिन्दु धर्मशास्त्र र बैज्ञानिक रुपमा पिपलको अतुलनिय महत्व : पढेर शेयर गरौँ सबैको भलो होस् ! appeared first on News782Online.
Previous: बल्ल आएर संक्रमण बारे सबैलाई खुसिबनाउने खबर बाहिरियो, डब्लूएचओले पनि निकाल्यो बिज्ञप्ति:हेर्नुहोस
Next: झापामा खाना पकाउने ग्यास विस्फाेट हुँदा एकको मृत्यु, १२ घाइते